Exercise – Page2– Healthy Life Journal
ခါးနာဝေဒနာ သက်သာစေမည့် ကိုယ်နေဟန် ၆ ခု
———၊ လရိပ်မေ ၊——— တစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးချိန်မှာ ခါးနာဝေဒနာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတယ်လို့ လူအများစုက ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက နာရီပေါင်းများစွာ ကြာကြာအလုပ်လုပ်တာနဲ့ ကိုယ်နေဟန်မမှန်တာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ အချိန်အကြာကြီး တစ်ပုံစံတည်းထိုင်တာက ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေသလို လျှောထိုင်ရင်လည်း နာတာရှည် ခါးနာဝေဒနာကို...
ထိုင်ရာမထ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ထိရောက်မှုရှိသလား . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ ထိုင်ရာမထ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ရောဂါထိန်းချုပ်မှုမှာ သင့်တော်ပါသလားဆရာ။ A. သီအိုရီအရ လှုပ်နေရင် ထိရောက်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သုံးချက်နဲ့တော့ ပြည့်စုံရပါတယ်။ (၁)...
အိပ်ရာမဝင်ခင် ပြုလုပ်သင့်သည့် ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း ၆ မျိုး
———၊ လရိပ်မေ ၊——— ဒီဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းက တစ်နေ့တာအတွင်း ခံစားရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းမှုကို ပြေလျော့သွားစေပြီး တစ်ညလုံး အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်မောကျစေမှာပါ။ (၁) ထိုင်ရင်းဆွဲဆန့်သည့် ကျင့်စဉ် ထိုင်ရင်း ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို နောက်တစ်ဖက်ပေါ်ချိတ်ကာ ဆန့်ကျင်ဘက်လက်နဲ့ ခြေကျင်းဝတ်ကိုကိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို လှည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်...
မိတ်ဆွေ . . တစ်ချိန်လုံး ပင်ပန်းနေပါသလား
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ပြီး ပင်ပန်းတာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပေမယ့် တစ်ချိန်လုံးပင်ပန်းနေတာမျိုးကတော့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုခုနဲ့ ဆက်စပ်နေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး စွမ်းအင်တွေ ကုန်ဆုံးပြီး ပင်ပန်းနေရတာကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ သွေးနီဥတွေက ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေအားလုံးဆီကို...
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေရန် စက်ဘီးစီးပါ
———၊ ဇွန် ၊——— နေခြည်နုနုထဲမှာ စက်ဘီးစီးပေးတာဟာ ကယ်လိုရီများစွာ လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ သင်စီးတဲ့ စက်ဘီးစီးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီး ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနှုန်းက ကွာခြားသွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်နာရီမှာ စက်ဘီးစီးနှုန်းဟာ ၁၀ မိုင်အောက်နည်းရင် ၂၇၂ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းပါလိမ့်မယ်။ တစ်နာရီမှာ စက်ဘီးစီးနှုန်းဟာ ၁၀ မိုင်အောက်နည်းရင်...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် သွေးလွှတ်ကြောများကို ပျော့ပျောင်းကျန်းမာစေနိုင်
အမျိုးသား ၁၄၀ဝ၀ နီးပါးကို လတ်တလော လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ အထိုင်များတဲ့သူတွေဟာ အသက် ၄၀ အရွယ်မှာ သွေးတိုးတဲ့ အစောပိုင်းလက္ခဏာတွေကို တွေ့ရပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေကတော့ သွေးတိုးတဲ့ အရိပ်အယောင် မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် သွေးလှည့်ပတ်စီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ချွေးထွက်များကာ...